लाहुरे राहुल र स्मिताको बारेमा शिशिर भण्डारीले रु; दै यस्तो भने । शिशिरको मनैछुने स,न्देशले सबैलाई रुवा;यो (भिडियो हेर्नुस) | Public 24Khabar
Home News लाहुरे राहुल र स्मिताको बारेमा शिशिर भण्डारीले रु; दै यस्तो भने ।...
नेकपाकै ओली समूहले चाहिँ शुक्रबार नारायणहिटी अगाडिको सडकमा आमसभाको कार्यक्रम राखेको छ । खुलामञ्चलगायत टुँडिखेल क्षेत्र खाली गराउन अभियान चलाइरहेको ‘अकुपाई टुँडिखेल’ का संयोजक विजय श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चाह्यो भने एकैछिनमा खाली गर्न सकिने खुलामञ्चमा ध्यान दिइएको छैन । सभा/समारोह गरुन् तर हामीलाई अप्ठ्यारो पार्नु भएन । एक ठाउँमा सवारी जाम भयो भने पूरै उपत्यकाको सवारी प्रभावित हुन्छ ।
खुलामञ्च तीनतिरबाट अतिक्रमित भएको छ । उत्तरी भागमा काठमाडौं महानगरपालिकाले गाडी पार्क गर्न दिएको छ । पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्युटावर बनाउन लागेपछि उक्त बसपार्क खुलामञ्चको माथिल्लो भागमा सारिएको छ । ६ महिनाका लागि सारिए पनि ६ वर्ष नाघ्दासम्म अस्थायी बसपार्क हटाइएको छैन । पश्चिमतिरको भाग दरबार हाईस्कुल बनाउने जिम्मा पाएको चिनियाँ ठेकेदारको आवासका लागि प्रयोग भएको छ ।
खुलामञ्चको करिब आधा क्षेत्र आवासले ओगटेको छ । भित्र ब्याटमिन्टन कोर्टसमेत बनाएर खुलामञ्च अतिक्रमणमा परेको छ । बीचको भाग निजी गाडी पार्क गर्न प्रयोग भएको छ । यहाँ महानगरले नै एक घण्टाका लागि पार्क गर्ने अनुमति दिएको छ । यहाँ आधाभन्दा बढी वीर अस्पतालकै गाडी पार्क हुने गरेका छन् । वीर अस्पताल र दरबार हाईस्कुलको निर्माण भइसके पनि अतिक्रमण हटेको छैन । वीर अस्पतालका निर्देशक केदारप्रसाद सेन्चुरीले गत वर्ष नै केही दिनमा निर्माण सामग्री हटाइसक्ने बताएका थिए । २०७२ सालमा भूकम्प जाँदा अस्पतालले खुलामञ्चमा राखेर बिरामीको उपचार गरेको थियो । निर्देशक सेन्चुरीले सामान हटाउने तयारी गरिरहेको बताए । ‘खाली ठाउँ हामीलाई नै चाहिन्छ । हामी खुला ठाउँ मास्ने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने ।
चीनको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको दरबार हाईस्कुलको उद्घाटन कात्तिकमै भइसकेको छ । स्कुल निर्माण सकिए पनि ठेकेदार अझै दुई वर्ष बस्ने भएका छन् । ‘भवनमा केही टुटफुट आइलाग्यो भने उनीहरूले नै बनाउनुपर्ने सम्झौता छ,’ स्कुलका निमित्त प्रधानाध्यापक अखिलेशप्रसाद आजादले भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले राखेको हो । महानगर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, शिक्षा मन्त्रालय बसेर कुरा गर्ने हो भने यो समस्या दुई दिनमै सल्टिन्छ ।’
गत वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले तीन महिनामा हटाइसक्ने बताएका थिए । ‘त्यतिबेला मेयरले हामीलाई राजनीतिक उद्देश्यले अभियान चलाएको आरोप लगाउनुभएको थियो,’ संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘वीर अस्पताल र दरबार हाईस्कुल बनाइसक्दा पनि खोइ त हटाएको ?’ महानगरपालिकाले भने अतिक्रमण हटाउन छलफल गरिरहेको दाबी गरेको छ । ‘हटाउन पहल भइराखेको छ । चिनियाँ ठेकेदार बसेका टहरा पनि हटाउँछौं,’ महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने, ‘कुन बेला हटाउने भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिएन तर हटाउँछौं ।’
Previous articleनेपाल भारत प्रत्येक सिमनामा नेपाली से*ना परिचालन ! भारत भर चल्यो खै*लावैला! कालापानी बाट फौज हटाउदै!
Next articleबिहे न,गरेकी युवतीले अनै,तिक सम्बन्ध बाट बच्चा ज,नमाए यस्तो गरिन। कु,कुरले लुछि लुछि खायो। Pyuthan